L'Ecriture, la Grâce, la Foi
« Indro Aho homba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan’izo tontolo izao. » (Matio 28.20)
Mba ho fitandrovana ny fahasalamana, manoloana ny fihanaky ny valan’aretina ankehitriny, dia nanapa-kevitra ny Komity fa :
Hikatona ny fiangonana manodidina ny Krismasy sy nyTaom-baovao (24-25-26 desambra sy 02 janoary).
Jereo eto ny FANAZAVANA amin'ny antsipiriany.
Koa dia mampahery sy mitaona antsika hiombom-bavaka manoloana izao fotoana sarotra izao.
Ny Pastora Edmond Raharijaonarivelo
sy ny Komity FLM Paris
Zoom FLM Paris
"Izay mandinika ny teny no hahita soa; Ary izay matoky an'i Jehovah no ho sambatra" Ohabolana 16:20
Nosokafana ny chaine Youtube "ZOOM FLM PARIS", mba hahafahantsika miverina mijery sy mihaino ireo Toriteny sy Fampianarana notsongaina nandritra ny fotoana niarahana tao amin'ny zoom.
Ny ekipa teknika.
Écrit par Cafebible
Vaovao fanorenana Toby, Jolay 2021
Écrit par Komity Fanorenana
Faly miarahaba anareo indray tompoko, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika.
Inty indray ary ny vaovao "Jolay 2021" mikasika ny Fanorenana ny Toby Pouru.
Miroso amin’ny dingana manaraka isika amin’ity asa fanorenana ity. Voasoratra ao anatin'ny taratasy ny antsipirihany amin'izany.
Taratasy alefan'ny Biraon'ny Toby araka ny mahazatra antsika amin'ny
- teny malagasy
- teny frantsay
Dia misaotra anareo mialoha ary mirary fitahin'ny Tompo ho antsika rehetra manoloana ny asany.
Fantaro ny FLM
Vaovao fanorenana Toby Pouru fev 2021
Les voeux du Pasteur
Vaovao sy fandaminana
Isan-taona Toby Pouru
Sampana Sekoly Alahady Loterana
Hafatry ny Krismasy
Sampana Kristiana Tanora Loterana Malagasy
Fifohazana : Réveil